Tababare Contact iPhone: Import / Dhoofinta / Delete / midowdo Contact Si fudud
> Resource > iPhone > Manager Contact iPhone u iPhone 5s / 5c iPhone / iPhone 5
Haddii aad la xiriirto dadka badan oo si joogto ah, waxaad u baahan kartaa qabaal iPhone xiriir ah - TunesGo Wondershare . Waxa ay wax walba oo aad u. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dhoofsadaan xiriirada ka file vCard (s), Outlook, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Book si aad iPhone, iyo qeybsanaan. Marka badan oo xiriirada nuqul ku saabsan iPhone tahay, xitaa waxaad iyaga ku milmaan karo oo aan laga badinin wax.
Tababaraha Contact for iPhone: dejinta / dhoofinta / tirtirto / midowdo xiriirada
In qayb hoose, waxaan idin tusi doonaa sida loo maareeyo xiriirrada aad iPhone fudayd. Hadda, bal aynu aad u bilowdo!
Tallaabada 1. Isku iPhone la your computer
First of dhan, rakibi iyo abuurtaan Tababaraha xiriir this u iPhone on your computer. Waxaa si buuxda la socon daaqadaha 10/8/7 / Vista / XP. Connect aad iPhone la kombiyuutarka via cable USB ah. Marka barnaamijkan ogaadaa aad iPhone, waxay ku tusi doono oo dhan content aad iPhone khaanadda bidix ee suuqa hoose.
Tallaabada 2. Contact Tababaraha iPhone
Tiirka bidix, guji "Xiriirada" tab. Suuqa kala xiriir maamulka ayaa u muuqda ee guddiga midig.
Si aad u dajiyaan xiriirada si iPhone , guji "Import / Dhoofinta" button. In menu hoos-hoos, guji "Import xiriirada ka computer". Markaas, liiska jiido hoos ah ayay soo booda. Waxaad dajiyaan karaa xiriir ka vCard, Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013, Windows Live Mail iyo Windows Cinwaanka Book.
Si aad u dhoofiyaan xiriirada , guji "Import / Dhoofinta"> "dhoofinta Dhammaan Xiriirada" ama "Dhoofinta Xiriirada soo xulay". Marka liiska hoos-hoos yimaado, aad dhoofin karo xiriirada aad xasuusta iPhone oo ka iCloud, Yahoo! iyo Exchange in badan / a file vCard hal (s), Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013, Windows Address Kitaabka iyo Windows Live Mail.
Fiiro gaar ah: Haddii aad go'aansato in aad u dhoofiyaan xiriirada ku saabsan Accounts aad, sida Exchange, iCloud, Yahoo! iyo xisaab kale, marka hore, waxaa idinku waajib ah inuu saxiixo in xisaab adiga ku iPhone.
Iyada oo badan oo aan waxtar lahayn oo ku saabsan xiriirada aad xasuusta iPhone iyo xisaab, si fudud iyaga waxaad tirtiri kartaa. Dooro xiriir ah in aad doonayso in aad tirtirto. Guji "Delete". Markaas, laydi soo booda. Guji "Haa". Barnaamijkan bilaabataa in ay tirtirto xiriiro oo la soo doortay.
Intaa waxaa dheer, haddii aad ka heli xiriiro badan oo nuqul ku saabsan xisaabaadka iyo xusuusta iPhone, waxaad iyaga ku milmaan karo. Guji "De-nuqul". Barnaamijkan wuxuu bilaabaa in uu ka raadin oo dhan xiriirada isagoo nuqul. Markaas, dhammaan dadka ay khuseyso nuqul waxaa lagu muujiyey. By default, dhammaan dadka ay khuseyso nuqul waxaa lagu saxay. Haddii aadan rabin inaad ku biirto qaar iyaga ka mid ah, waa in aad uncheck xiriirradaan. Markaas, dooro nooca kulan. Ka dib markii in, guji "midowdo soo xulay" iyo ka dibna "OK".
Waa hagaag, in sida in TunesGo maamushaa xiriirada on iPhone. Ka sokow xiriirada, waxaad samayn kartaa ka iPhone wareejiyo fariimaha qoraalka ah si aad u computer . Haddii aad sawiro badan oo la iPhone qaado, aad sawiro ku Camera Roll ama xataa Photo Library si aad u computer sidoo kale ku wareejin karaa.